Shiinaha SHEHWA-370-DTH kalluumeysato seperated dusha dusha sare Haydarooliga hoos-godka qodista Mashiinka iyo Soo-saare | Xuanhua
SHEHWA-370-DTH Riigga qodista waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa miinooyinka godadka u furan sida sibidhka, metallurgy, macdanta dhuxusha, meelaha laga qodo, qodista godadka tareenka, waddada weyn, dhowrista biyaha, quwadda korontada iyo mashaariicda dhismaha qaran ee difaaca.
Gawaarida dusha sare ee lagu dhejiyo dusha sare ee hawo-qodista
SHEHWA-370-DTH Riigga qodista waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa miinooyinka godadka u furan sida sibidhka, metallurgy, macdanta dhuxusha, meelaha laga qodo, qodista godadka tareenka, waddada weyn, dhowrista biyaha, quwadda korontada iyo mashaariicda dhismaha qaran ee difaaca. Qiyaasta cabirka godkeeda waa 90-178mm, kaas oo lagu qalabeyn karo noocyo kala duwan oo kombaresarada hawada ah si loo ogaado qoditaanka DTH ee cadaadiska sareeyo.
Jirka jir waxaa loogu talagalay aaladda cuf isjiidadka, taas oo yareyneysa iska caabinta khilaafka inta lagu guda jiro socodka, waxay sare u qaadeysaa isku xirnaanshaha jirka iyo wadada, waxayna ka dhigeysaa in jiiska qodista qashinku ahaado mid waara oo xasilloon. Markaad ka gudbeysid jiirada, iyo fuulitaanka dhaadheer waxay gaari karaan 35 darajo.
2. Hoos udhaca Rotary
Toosiyaha-iligga yareeya wuxuu leeyahay kor u kaca heerkulka hooseeya, culeys badan oo saaran iyo adeeg dheer, kaas oo hagaajin kara xawaaraha wareega sida ku cad dhagaxa adkaanta. Madaxa Rotary wuxuu ku qalabeysan yahay Eton haydarooliga si loo gaaro xaaladda shaqada ee deggan. Waxay ku qalabeysan tahay xoojinta wadajirka nuugista shoogga si loo yareeyo saameynta falcelinta xoogga ee godadka qodista si loo waxyeeleeyo soo-celinta wareegga.
3. Aaladda qashinka siigada
Aruuriyaha boodhka wuxuu qaataa tiknoolajiyada kicinta nadiifinta boodhka, taas oo leh awood nadiifin boodh ah, waxtarka sare ee ka-qaadista boodhka, feejignaanta qiiqa oo hooseeya, heerka baxsiga hawada oo hooseeya, isticmaalka tamarta oo hooseeya, hawlgal xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, iyo ilaalinta caafimaadka hawlwadeennada. Qalab tayo sare leh, hufnaanta boodhka iyo nolosha adeegga waa la damaanad qaaday.
SP QAYBAHA FURAN
Dhexroor dalool 90-178mm
Cadaadiska Hawada Shaqeysa 1.7-2.5 Mpa
Wareegidda tiirarka 3280N.m
Xawaaraha wareejinta 0-110Rpm
Xoog qaadista 20KN
Is rogrogmadaya jir Bidix 54 ° / Midig 50 °
Soodhawaynta qaab-dhismeedka 135 °
Qulqulka boodka qoditaanka Bidix / Midig 45
Qulqulka boodboodka jiif 22 ° / 65 °
Awoodda fasalka 35 °
Soo saaraha Mashiinka YUCHAI Diesel iwm
Awood la qiimeeyay 73.5 / 92 Kw
Cabbir 5750 * 2170 * 2300mm
Hore: SHEHWA-360-DTH gurguurta seperated dusha dusha Haydarooliga hoos-godka qodista mashiinka
Xiga: SHEHWA-380-DTH Rigga Qalliinka Pneumatic